रोगमा राजनीति नगरौं,आपात्काल घोषणा गरियोस | Ekhabar Nepal
माघ ६ 2077
रोगमा राजनीति नगरौं,आपात्काल घोषणा गरियोस
स्वास्थ्य चैत्र १० २०७६ ekhabarnepal
२. यो भाइरस रोग थियो। यस्को रास्ट्रीयता थिएन। यो मानिसको विरुद्ध थियो रास्ट्रीयताको बिरुद्ध थिएन। तर युरो-अमेरिकन संचारमाध्यमले यसलाइ राजनीति ठट्टामा बदले। साप र चमेरो खाएर तेस्तो भको भनेर लेखे। पस्चिमी संस्थाले जनाबार मारेको पाप कराएको भनेर लेखे। केही नेपाली संचार माध्यामले पनि यहि कुरा दोहोर्याए। अब व्हिन सकियो भनेर पस्चिमले खुसी देखायो। जब रोगका विरुद्ध लंडाइ शुरु गर्यो चिनले, अधिनायकवादको कुरा उठाए। कुटिकुटी मानिस थुनेको आरोप लगाए। अर्थात रोगलाई राजनितिकरण गरे। तेस्को नक्क्ल गर्ने नेपालमा पनि थिए। पश्चिमी मुलुकले तेसबेला चीनलाई यस माहामारीका विरुद्ध सहयोग गर्नुपर्ने थियो। रोगमा राजनीति गर्नु हुने थिएन।
३. अहिले चीनले बद्ला लिएन। चीनले अन्तरास्ट्रिय दाइत्वलाई राम्रो सङ्ग आगाडी बढाइरहेको छ। उस्ले अहिले संवेदना र मानवीयताका आधारमा युरोपलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने ठान्यो। उस्ले सहयोगका हात अगाडि बढायो। अहिले नेपालि पत्राकार माओका मुखमा टांसेको मस्कले युरोपिएन जनताका मुखमा पस्नबाट भाइरस रोकिरहेका छन। यस माहामारीले बिश्वका थुप्रै लुकेका कुराहरुलाई पनि बाहिर ल्याएको छ।
ख. पुजिंबाद र समाजबादको बिचको फरक प्रष्ट देखिएको छ, अहिले। चीनमा जब यो भाइरसका विरुद्ध लंडाइ चलिरहेको थियो, सबैलाइ सरकारले गर्ने सहयोग उस्तै थियो। गरिबले काम गर्न नपाएर मर्नु पर्ने र धानीले अलिसान महलमा आइसोलेसनमा बस्ने स्थिती देखिएन। तर पुजिंबादि अमेरीकामा धनिकालागि महंगा अस्पताल छन, सबै सुबिधा छ्न। तर तल्लो आर्थिक अवस्था भएका जनताको हालत खराब छ। त्यांहाका संचार माध्यामले त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउदैनन? किनभने सबै संचार माध्याम कर्पोरेट हाउसका आधिनमा छ्न र उनिहरुको स्वार्थ भ्रष्ट पुंजिबादको सेवा गर्नु हो। यता नेपालमा पनि उन्को प्रभाव छ, तेसैले ट्र्म्पको मुखमा मास्क लगाएको तस्बिर छाप्दैनन। माहामारीको सामाना गर्न पुंजिबाद असफल हुने रहेछ भन्ने कुरा, २० हजार मनिसमा संक्रमण हुदां ६००० मरेका घटनाले पुष्ठि गर्छ्न। नेपालमा पनि धनीहरुको यो माहामारी रोक्ने सहयोग देखिएन। धनिका अस्पतालमा ज्वोरो आएका मानिस छिर्नै नपाउने अवस्था पो आयो।
ग. पस्चिमी पुजिवादी अर्थतन्त्रका लागि यो माहामारी त्रासधीपुर्ण हुने देखियो। एसिया खासै प्रभाबित नहुने पनि देखियो। एसियामा माहामारीलाई रोक्न चीनको सहयोगले भुमिका खेल्ने पनि देखियो। तर पस्चिमी प्रभाबमा रहेको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले चीनला माहामारीका समयमा नेपाल हाम्रो असल मित्र हो भन्ने भाव देखाउन सकेन।यो कुरा सरकार र दलहरुलाई अहिले पनि महसुस भएको जस्तो लाग्दैन। यस्ले नेपालको चीन सङ्गको कुट्नितीमा धमिरा लागेको आंशका गरिएको छ।